ERITREA oo ay suurta-gal tahay inay ku biirto dagaalka ka socda gobolka Tigray | Warkii.com
Home warkii ERITREA oo ay suurta-gal tahay inay ku biirto dagaalka ka socda gobolka...
ERITREA oo ay suurta-gal tahay inay ku biirto dagaalka ka socda gobolka Tigray
Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in dagaalka ka socda gobolka Tigrayga uu noqdo mid sii daba dheeraada oo ku baaha guud ahaan gobolka Geeska Africa. Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa Arbacadii iclaamiyay tallaabo milateri oo ka dhan ah gobolka waqooyi bari ee Tigrayga.
Saldhigashada welwelka soo shaac baxay ayaa ah dalka yar ee dhinaca waqooyi gobolka Tigrayga deriska yihiin ee Eritrea, inuu gaashaan u noqdo go’aanka Abiy Ahmed, waxaase shaki ku jirin inay jiraan warbixino sheegaya in si adag loo askareeyay dhalinyarada reer Eritrea iyo dhaq dhaqaaqyada ciidamada ee gudaha Eritrea ee gobolkaan xuduuda la leh.
Talaabada milatari ee Addis Ababa waxay timid kadib bilo uu taagnaa khilaaf u dhaxeeyey dawladda dhexe iyo xisbiga Tigray People’s Liberation Front (TPLF), xisbigaas oo xukumayey siyaasada Itoobiya muddo soddon sano ku dhow ilaa Abiy xukunka la wareegay 2018.
Cadaawada ka dhaxeysa madaxweynaha mudada dheer xukumayay Eritrea Isaias Afwerki iyo kooxda TPLF ayaa dib usoo cusboonaaday tobanaan sano kadib – laakiin marwalba sidan ma ahayn. Laga soo bilaabo bartamihii 1970-naadkii ilaa horraantii 1990-meeyadii, Jabhadda Xoreynta ee Ereteriya (EPLF), oo uu Isaias aasaasey, iyo kooxda TPLF waxay walaalo ku ahaayeen halgankii dheeraa ee looga soo horjeedey dawladdii milatariga ee Itoobiya ee uu hoggaaminayey Mengistu Haile Mariam.
Mengistu waxaa xukunka laga tuuray bishii May 1991, laba sano kadib Ereteriya waxay xornimadeeda ku qaadatay afti dadweyne. Dhanka kale kooxda TPLF ayaa noqotay mid hogaamisa isbahaysiga xukuma dalka Ethiopia, “Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front” (EPRDF), iyadoo hogaamiyihii dhintay ee Tigray Meles Zenawi uu noqday raysalwasaaraha wadanka.
1998, Eriterea iyo Itoobiya, si kastaba ha ahaatee, waxay u dagaallameen dagaal dhuleed, dhaqaale iyo siyaasadeed oo murugsan oo ay ku dhinteen tobanaan kun oo qof. In kasta oo heshiiskii nabadeed ee Algiers bishii Diseembar 2000 la soo afjaray colaaddii xadka ee deriska, haddana Itoobiya iyo Ereteriya waxay ku sugnaayeen xaalad is-hor-taag hubaysan muddo ku dhow 18 sano intii uu Meles talada hayay iyo kadibba.
Dagaalkan qabow ayaa umuuqday inuu dhamaaday kadib isku soo dhawaanshihii Abiy iyo Isaias, kadib markii uu qabtay xafiiska bishii Abriil 2018, isagoo badalay ra’iisul wasaare Hailemariam Desalegn oo ay wejihi jireen bilooyin mudaaharaadyo dowladda looga soo horjeeday.
Kadib todobaadyo wadahadalo qarsoodi ah oo ka dhex socday EPRDF oo Abiy madalayay waxaa la rumeysan yahay inuu ka adkaaday diidmadii kaga imaaneysay TPLF oo horey u ahaan jirtay tan ugu awooda badan si uu ugu guuleysto gudoomiyaha isbahaysiga qoomiyadaha badan, ee afarta xisbi, jagadaas oo isaga ka dhigtay inuu noqdo ra’iisul wasaaraha Itoobiya.
Bishii Luulyo 2018, is-dhaafsi diblomaasiyadeed oo isdaba-joog ah oo xawli ku socda una dhexeeyay Addis Ababa iyo Ereteriya waxay keeneen guul, iyadoo cadaawadiii muddada dheer soo jirtay lagu badalay tanaasul iyo xiriirkii diblomaasiyadeed.
Martin Plaut, oo muddo dheer u kuur galayay siyaasada Geeska Afrika,wuxuu leeyahay dabeecadda madmadowga leh ee ka dhalatay diblomaasiyadda Itoobiya iyo Ereteriya ayaa si tartiib tartiib ah loogu quudiyay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha ee Itoobiya.
“Suuragal ma ahan in la hubiyo doorka Ereteriya ee dagaalada gudaha ee Itoobiya. Tan iyo booqashooyinkii ugu horeeyey ee midba midka kale ku tago caasimadaha labada hogaamiye bishii Luulyo 2018 waligeed ma dhicin shir jaraa’id oo ay suxufiyiintu ku weydiin karaan midkood ra’isul wasaare Abiy ama madaxweyne Isaias waxa ay rajada ka leeyihiin in ay gaaraan, ”ayuu yiri Plaut.
“War-murtiyeedyadu waxay ahaayeen been iyo war-bixin la’aan. Si kastaba ha noqotee, way iska cadahay in cilaaqaadku uu maanta yahay mid aad u dhow oo aan macquul ahayn in hogaamiyaha Itoobiya uu hawlgal weyn oo noocaas ah ka fulin lahaa xadka Eritrea, isaga oo aan ku cadeyn nambarkiisa ka soo horjeedka, ”ayuu raaciyay Plaut.
In kasta oo maamulka Isaias uu si cad ugu celceliyey cadaawada qotada dheer ee ay u hayaan kooxda TPLF, ku lug lahaanshaha Eritrea haddii ay jirto khilaafka hadda jira wali ma cadda ilaa hadda. Dhanka kale, khadka taleefanka iyo isgaarsiinta internetka oo ka go’ay Tigray-ga ayaa adkeeyay xaqiijinta xaalada gobolka iyo xuduudaha, taasoo keentay in la isla dhexmarayo.
“Waxaa jiray warbixino sheegaya in si adag loo askareeyay dhalinyarada reer Eritrea iyo dhaq dhaqaaqyada ciidamada ee gudaha Eritrea, kuna dhow xadka ay la wadaagaan Tigray. Qaar ka mid ah ayaa filayay hawlgal isku dubaridan oo ka dhan ah Tigray oo ay Itoobiyaanku ka soo weerarayaan koonfurta iyo Ereteriyaanka ka imanaya waqooyiga. Illaa iyo hadda tani uma muuqato inay dhacday, ”ayuu yiri Martin.
“Weerarka Ereteriya weli waa uu socon karaa, laakiin Tigrayga ayaa si fiican u hubaysan, Madaxweyne Isaias ayaa laga yaabaa inuu waqtigiisa dalbado si uu u arko bal in ciidamada Ra’iisul Wasaare Abiy ay horumar sameynayaan ka hor intaanay ciidamadooda gelin.”
Tsedale Lemma, oo ah tifaftiraha guud ee wargayska Addis Standard, isla markaana ka warbixisa arimaha gudaha iyo dibada, ayaa sheegay in maqnaanshaha heshiiskii nabadeed ee 2018 ay quus ka dhigtay tuhunka saraakiisha Tigrayga ee ku aadan ujeedka Abiy iyo Isaias.
Waxay sidoo kale xustay “daahitaankii xukunka” ee ka yimid Abiy “inay dhinac u dhigto TPLF inay qayb dhab ah ka noqoto heshiiskii nabadeed ee u dhaxeeyay Itoobiya iyo Eriteriya bilowgiiba”.
“Waxay ahayd inuu ogaa RW Abiy in dhamaan khilaafaadka siyaasadeed ee kala dhaxeeya TPLF, nabada udhaxeysa Itoobiya iyo Eriteriya macquul ahaan macquul maahan hadaan ku lug lahaanshaha iyo hadal macno leh ee TPLF,” ayuu yiri Tsedale.
TPLF waxay ku eedeeyay ra’iisal wasaare Abiy inuu isku dayayo inuu “dhinac ka dhigo iyo xitaa inuu dambi galiyo” kooxda TPLF, hogaamiyayasha Tigrayga bishii Sebtember waxay qabteen doorashooyin iyaga oo diidaya go’aankii dawlada dhexe ee ahaa in dib loo dhigo dhamaan doorashooyinka sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus. Iyada oo ay kacsantahay xiisad isla markaana dhinac walba uu ka kassan yahay dareenka, hogaamiyeyaasha TPLF bilihii lasoo dhaafay waxay sidoo kale ku eedeeyeen cadowgooda Ereteriya, in ay faragalin ku hayso arimaha gudaha Itoobiya si ay isugu dayaan in ay gees uga dhigaan Tigray.
Bal aan eegno, xaalada maalmaha soo socda iyo isbadalada dhici doona, dadaalka midowga Africa, IGAD iyo caalamka oo ugu horeeyo Mareykanka iyo Shiinaha oo xiriir wanaagsan la leh Itoobiya.
Previous articleIlhaan Cumar oo doorashadeedii, kadib cambaareyn u jeedisay Israel
Next articleDENI ‘oo Ethiopia ka diiday’ qorshe la xiriira FARMAAJO kadib cadaadiska Imaaraadka
>Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xalay ku hoyday magaalada Baydhabo ayaa kulamo kala duwan ka bilaabay gudaha magaaladaasi, kuwaas oo...
Intee le’eg tahay awoodda militari ee gobolka Tigray oo ay is-hayaan...
Maxey tahay sababta ay SACUUDIGA u daahiyeen hambalyada JOE BIDEN?
Top news:-Jose Mourinho given suspended match ban and Spurs fined …